Email Nzaghachi Management | Martech Zone
Email Nzaghachi Management
Bọchị Sọnde, Machị 25, 2007 Douglas Karr
Nyaahụ m dara. Amaghị m na etu ọrụ m si arụ ọrụ siri ike, mana m na-arụ ọrụ na ọsọ nke ọrụ ahụ. M na-arụ ọrụ na a di na nwunye nke m na-agụ akwụkwọ otú a, oke… na-aga n'ihi na ole na ole, ehihie na abalị na-enweghị ụra iji wuchaa oru ngo. N'ebe ọrụ anyị, anyị na-emegide ọtụtụ atụmatụ. Ọ dị m ka m na-arụkwu ọrụ na usoro ihe omume nke jupụtala. Mgbe Satọde bịara, m kụrụ aka na ozi ịntanetị ole na ole wee nọrọ ụbọchị ọzọ (na abalị ụnyaahụ) na-ehi ụra ma ọ bụ n'ihu telivishọn na steeti vegetative. Nke a ọ bụ otu a ka ụnụ si hụ onwe unu n’ịrụ ọtụtụ ọrụ?
Otu n'ime ngwụcha izu izu bụ iji lelee Email Nzaghachi Management ụlọ ọrụ. Backgroundfọdụ ndabere: Email Response Management bụ ihe nkesa na-n'akụkụ technology na-enye ohere ụlọ ọrụ na-agbalị iyo, hazie, na-aza na-abata ozi ịntanetị na ọnyà email adreesị. Ihe atụ nwere ike ịbụ ahịa @ ma ọ bụ kwado ụlọ ọrụ gị.
Ọnụ ọgụgụ nke ngwa ndị dị ebe ahụ mara mma nke ukwuu! Ana m achọ ịhụ ihe ndị ọzọ na-ere ahịa n'ịntanetị na-eme. N'ime ụlọ ọrụ na-eweta ọrụ Email, Email Response Management na-abụ ọrụ nke abụọ ka anyị wee ghara ịsọ mpi na ndị a ma ọ bụ na anyị enweghị usoro sistemụ ha na-eme.
Site na sistemụ Nzaghachi Email, enwere m ike itinye isiokwu ọchụchọ na isiokwu na ahụ iji wepụta email m nye onye kwesịrị ekwesị. Enwekwara m ike ịzaghachi email ahụ ozugbo site na ozi ahaziri ahazi. Otu ihe atụ: Enwere m ike izipu ụlọ ọrụ email ma jụọ ma ha nwere API ma kwado Ndị Ahịa priselọ Ọrụ. My Email Response Management usoro ga-akpaghị aka na-aga email na ahịa folks na-emeso Enterprise atụmanya ndị mkpa API nkwado.
Nakwa, m ga-enweta ọmarịcha azịza email na-agwa m na ha natara email m na mmadụ ga-enwe na aka nso n'oge na-adịghị anya… ugbu a, biko lelee isiokwu ndị a na onyinye dị n'ịntanetị. N'ime njikọ ndị ahụ jikọtara ọdịnaya na Enterprise na API isiokwu na onyinye na weebụsaịtị nwere ike inyere ndị ahịa aka. Maka ndị otu nkwado, ozi ịntanetị ndị a nwere ike ịnwe isi ihe ọmụma edere edere maka ụfọdụ njehie ezighi ezi, wdg ndị kọọrọ na email.
N’amaghị ya, anyị niile natara ozi-e sitere na sistemụ ndị a. Ọ bụrụ n’inwere ụfọdụ ndị na-ere ahịa ma ọ bụ ngwa a nwere ahụmịhe ozugbo, dọnye m ahịrị. Enwere m mmasị karịsịa ma ọ bụrụ SaaS azịza. Ọ ga-akara m mma na anyị ebuteghị wiil ahụ mgbe ị na-achọ ịbawanye ikike anyị.
Achọpụtara m onwe m Doug na m nwere ike ikpo ọkụ n'izu ruo ọtụtụ izu na njedebe mana otu ụbọchị ga-abịa ma ike gwụrụ m nke ukwuu .. ọkpụkpụ ike gwụrụ .. ma ọ bụ abụọ.
Ozugbo m mere na mgbe ahụ m ga-alaghachi na a "nkịtị" oge 🙂
Obi dị m ụtọ na ọ bụghị naanị m, Steve!
M na-amalite na-enweta na nakwa .. Echere m na m na-eme ụzọ ọtụtụ .. m na-eche na anyị niile kwesịrị selata down
Mee 11, 2011 na 7: 07 AM
Email bụ nkeonwe. Nnukwu ma ọ bụ obere azụmaahịa na-eji email.A ngwa ọrụ dị mfe ma dị ọnụ ala.Ezi ọrụ ijikwa ozi ga-eme ka gị na ndị ahịa gị nwee atụmanya azụmaahịa gị.